भारतीय दुतावासमा किन छिरे नेपाली पत्रकार ? - Jhilko
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले छानिएका अनलाइन, टेलिभिजनका केही मालिक र पत्रकारलाई रात्रिभोज दिएको विषय यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपालका हरेक क्षेत्रमा भारतले हस्तक्षेपको नीति लिएको खुलेआम सार्वजनिक भइरहेको छ । उच्च र मध्यम स्तरका नेतादेखि कर्मचारी, व्यवसायीदेखि पत्रकारहरुसमेत भारतीय हितका लागि काम गर्छन् भन्ने सुनिएको थियो । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा भारतीय लगानी भित्रिएको चर्चा यतिबेला सेलाएको छैन ।
भारतसँगको सम्बन्धका तमाम पक्षमा नेपालले यसै पनि समस्याहरु व्यहोरिरहेको छ । भर्खरैमात्र नेपाल भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध भारतीय दूतावासले दबाबमूलक वक्तव्य जारी गरेको थियो । यस्तो बेला भारतीय राजदूतको निवासमा यी पत्रकारलाई रक्सी र मासुको स्वाद लिन मात्र बोलाइएको पक्कै नहुनुपर्छ ।
कसैलाई अपच भए पनि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि यसले अरु केही दिन नसके पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छ भन्ने थियो, छ । यतिबेला ओली सरकारविरुद्ध नियोजित रुपमा अभियान चलाइरहेका कतिपय पत्रकारलाई बोलाएर भारतीय दूतावासमा रात्रिभोज दिइनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । यो सरकारविरुद्ध मात्र होइन, नेपालविरुद्धकै अभियान हो । नेपाललाई गिद्दे दृष्टिले हेर्दै र हेप्दै आएको भारतीय दूतावासको आयोजनामा दूतावासमा आयोजित रङ्गीन रात्रिभोजमा सहभागी हुने पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गर्ने तथा देशको हितको पक्षमा के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले नेपालको पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनियता र पत्रकारको साख गिराएको छ ।
भविष्यमा ती सञ्चारगृह र पत्रकारले नेपालविरुद्ध हुने भारतीय गतिविधिलाई ‘सफ्ट’ हुँदै ‘हार्ड’ समर्थन गर्ने वातावरण बनाउने निश्चित छ । लडाइँका बेला विपक्षी सेनालाई अलिकति पनि मद्दत पुग्ने काम गरे एउटा सिपाहीलाई कोर्टमार्शलमात्र होइन, मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ । जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध भए पनि विभिन्न कारण भारतीय सत्तासँग नेपालले विभिन्न प्रकारका लडाइँ लड्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा देश हितप्रतिकूल काम गर्ने पत्रकारलाई राज्यले कार्वाही गर्न सक्छ कि सक्तैन ? हामीजस्ता सर्वसाधारण त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं । हातमा कलम, माइक र मिडिया भएपछि जसलाई जे लेख्न–बोल्न पनि छुट हुन्छ ?
विषादी प्रकरणलगत्तै हामी पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या भोगिरहेका छौं । तराई डुबानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या भारतले बलमिच्याइँ गर्दै निर्माण गरेका बाँधहरु हुन् । यो सत्य हो कि प्राकृतिक विपत्तिले सानो र ठूलो देश भनेर क्षति पनि त्यही अनुसार पु¥याउँदैन । प्राकृतिक नियमअनुसार बाढीको बहाव ओरालोतिरै हुने हो । तर भारतले नेपालसँगका सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत बाँधका संरचना बनाएको छ ।
हाम्रा पत्रकारहरुलाई रक्सी र बँदेलको मासुको स्वादमा यस्ता विषयमा लेख्न/बोल्न नसक्ने ‘विषादी’ पनि मिसाएर खुवाइएको नहोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
आधा सिलिन्डर ग्याँस बेच्न निर्देशन
माग अनुसार पुर्याउन नसकिने अवस्था आएकोले आधा सिलिन्डर ग्याँस मात्रै बेच्ने निर्णय...